नेपाली सुन्दरीहरूको ट्याटु मोहः कसले कुन अंगमा खोपेका छन् …? – Khabar Patrika Np
नेपाली सुन्दरीहरूको ट्याटु मोहः कसले कुन अंगमा खोपेका छन् …?
प्रकाशित मिति: शनिबार, कार्तिक २०, २०७८ समय: १२:१८:१७
सहरी क्षेत्रमा ट्याटु बनाउने फेसन नै चलेको छ । पहिले प्रेम, धार्मिक आस्था तथा आफ्नो बलियोपन देखाउन ट्याटु खोपाइन्थ्यो ।
हिटलरको शासनकालमा यहुदीहरूको पहिचानका लागि अंकको ट्याटु बनाउने चलन थियो । अहिले मानिसहरूले कला, सुन्दरता, धार्मिकता, प्रेमजस्ता भावना, रुचि आदि दर्साउन ट्याटु खोपाउने गरेका छन् ।
नेपालमै पनि नेवार, तामाङ, थारू आदि समुदायमा ट्याटु खोप्नुलाई संस्कृतिकै रूपमा लिइएको पाइन्छ । यी जातिले सियोको सहायताले शरीरका विभिन्न अंगमा ट्याटु खोप्ने चलन धेरै पुरानो हो । नेवार समुदायमा महिलाको खुट्टामा खोपिएको ट्याटुले शक्तिको संकेत गर्ने विश्वास छ ।
सानै उमेरमा ट्याटु खोप्दा रोग, दु:ख तथा शत्रुले आ-क्रमण गर्न नसक्ने परम्परागत मान्यता छ । थारू समुदायमा भने विवाहित महिलाले मात्र ट्याटु खोप्छन् । उनीहरू शरीरमा फूल, कोठी, घाम, जूनका साथै आफ्नो तथा श्रीमान्को नाम खोपाउँछन् । आफ्नो विवाहित जोडी मयूरको जोडीजस्तै होस् भनेर प्रेमपूर्वक चुच्चो जोडिएको मयूरको चित्र थारू महिलाले आफ्नो गोडामा खोपाउने चलन पनि पुरानै हो ।
ट्याटु खोप्नेमा सर्वसाधारण मात्र छैनन्, यसका पारखी सेलीबेटीहरूको संख्या पनि बाक्लै छ । बलिउड नायक अक्षयकुमारदेखि रणवीर कपुरसम्म, नायिका दीपिका पादुकोणदेखि प्रियंका चोपडासम्ममा ट्याटुमोह देखिन्छ । त्यसो त नेपालकै नायक तथा नायिकाहरूसमेत यो मामिलामा पछाडि छैनन् ।
नेपाली नायिकाहरूमा पनि गज्जबको ट्याटुमोह छ । उनीहरूले आफ्नो शरीरको विभिन्न अङ्गमा ट्याटु खोपाउँदै आएका छन् । आफूलाई निकै बोल्ड महिलाका रुपमा प्रस्तुत गर्दै आएकी स्मीता थापादेखि नायिकाहरू करिश्मा मानन्धर, सुष्मा कार्की, प्रियंका कार्की, वर्षा शिवाकोटी, साम्राज्ञीराज्य लक्ष्मी शाह, सिर्जना सुब्बासम्म तथा नायक राजेश हमाल, सौगात मल्ल, आर्यन सिग्देल, आयुष्मान देशराजदेखि अनमोल केसीसम्मले ट्याटु खोपाएका छन् ।
नायिका वर्षा शिवाकोटीले केही समयअघि दायाँ खुट्टाको पिँडुलामा भेडाको टाउकोसहितको महिलाको आकृति खोपाएकी थिइन् । उनले ट्याटुको रहर भन्दा पनि जन्मदाको बर्थ साइन आफ्नो शरीरमा अंकित गर्ने रहर पूरा गरेकी हुन् ।
के बनाउने भन्ने सोच्दासोच्दै आफ्नै राशिको चिह्न खोपाउने चाहना भयो— वर्षा भन्छिन् । वर्षाको राशि कन्या हो । त्यसैले उनले आफ्नो शरीरमा कन्या राशिको आकृतिलाई मोडिफाइ गरेर प्रस्तुत गरेकी छिन् । कन्या राशिको आकृति उनको पिँडुलाको ट्याटुसँग मेल खान्छ । यो ट्याटुले गर्दा आफ्नो खुट्टा अझ आकर्षक देखिएको उनको अनुभव छ । यो ट्याटुमा जस्तो पनि पहिरन सजिलै लगाउन मिल्ने उनले बताइन् ।
रंगकर्मी सिर्जना सुब्बाले आफ्नो दायाँ खुटाको तिघ्रामा ठूलो ट्याटु खोपाएकी छिन् । त्यहाँ उनले महिलाको कम्मरमाथिको नांगो शरीर बनाएकी छिन् । हुन त उनलाई त्यहाँ भृकुटीको आकृति खोपाउन मन थियो तर तिघ्रामा भृकुटी बनाउन असहज लाग्यो ।
उक्त ट्याटुले दुईवटा अर्थ राख्ने सुब्बा बताउँछिन् । पहिलो महिला भन्नासाथ समर्पित हुने स्वभावलाई चित्रित गर्छ भने हातको पोजिसनले समर्पित हुँदाहुँदै अति भयो भने महिलाहरू ल-ड्न पनि तयार हुने संकेत उक्त ट्याटुले दिन्छ ।
धेरैले देखिने पार्टमा ट्याटु खोपे पनि उनले सकभर कम देखिने शरीरको भाग रोजिन्, तिघ्रामै ट्याटु खोप्नुको रहस्य खोल्दै सुब्बाले भनिन्, म थिएटरमा काम गर्ने भएकाले विभिन्न चरित्रमा अभिनय गर्नुपर्छ जसले गर्दा ट्याटु उति सान्दर्भिक हुँदैन । त्यसैले तिघ्रालाई छानें । कहिलेकाहीं हाफ पाइन्ट वा स्कर्ट लगाउँदा आफ्नो ट्याटुका कारण फरक महसुस गर्छिन् उनी । यसले सिर्जनालाई आफू बोल्ड र स्पेसल छु जस्तो अनुभूति दिन्छ ।
हुन त उनको घाँटीमुनि बाघको ट्याटु पनि छ । यो ट्याटु खोप्नुमा भने उनको आफ्नै स्वार्थ छ । उनको त्यो पार्टमा मासु भुक्क उठेजस्तो देखिन्थ्यो । ब्लाउज लगाउँदा सबैले के भएको भनेर हैरान बनाएपछि सिर्जनाले उक्त ठाउँमा ट्याटु खोपाएकी हुन् जसले गर्दा मासु उठेको भाग मात्र छोपिएको छैन, सबैले प्रश्न गर्नुको साटो आहा † कस्तो राम्रो ट्याटु भनेर प्रशंसा गर्छन् ।
अभिनेत्री करिश्मा मानन्धरले दुई दशकअघि नै छातीको बायाँ भागमा गुलावको फूलको रंगिन आकृति खोपाएकी हुन् । त्यति बेला उनको ट्याटुलाई लिएर कतिपयले कुरा पनि का-टेका थिए । यद्यपि धेरैजसोले छातीको उक्त ट्याटुले उनको सौन्दर्य थप वृद्धि गरेको समेत बताएका थिए ।
करिश्मा विभिन्न पार्टी तथा कार्यक्रमहरूमा स्त-ननजिकको उक्त ट्याटु हल्का देखिने पहिरनमा पुगिरहेकी हुन्छिन् । करिश्माको ट्याटु ग्ल्यामरस त देखियोस् तर भल्गर नहोस् भन्ने चाहनाअनुरूप खोपाइएको छ । यो ट्याटु मेरो सुन्दरता र आकर्षणमा प्लस प्वाइन्ट भएको महसुस हुन्छ– करिश्मा भन्छिन् । ट्याटु खोपेपछि आफूमा आत्मविश्वास वृद्धि भएको उनको अनुभव छ ।
अहिलेकी चर्चित नायिका प्रियंका कार्कीको शरिरमा चारवटा ट्याटु छन् । उनी सानैदेखि ट्याटु मन पराउँथिन् । त्यही भएर प्रियंकाले आफ्नो शरीरमा अहिलेसम्म चारवटा ट्याटु खोपाइसकेकी छिन् । ती सबै ट्याटुको फरक–फरक अर्थ भएको उनले बताइन् ।
प्रियंकाले भनिन्— मेरो जीवनसँग जोडिएका यी ट्याटुले मेरो जीवनमा विशेष अर्थ तथा महत्व राख्छन् । प्रियंकाका ती चारवटै ट्याटु विदेशमा खोपाइएका हुन् । उनको पहिलो ट्याटु अमेरिकामा हुँदा १३ वर्षअघि खोपाइएको थियो । दाहिने हातको पाखुरामा भएको उक्त ट्याटुमा मर्मेडको आकृति अंकित छ । उक्त मर्मेडको हात आकाशतिर फैलिएको छ । यो ट्याटुले मर्मेड पानीसँगै आकाशतिर पनि फैलन सक्छ भन्ने अर्थ राख्छ । प्रियंकाका अनुसार यो ट्याटुले असम्भव भन्ने केही पनि छैन भन्ने सन्देश दिन्छ ।
उनको दोस्रो ट्याटु कोखा र छातीको बीचमा छ, जसमा डिज्नीको एउटा भनाइ कुँदिएको छ । प्रियंकालाई आफू पनि डिज्नीको क्यारेक्टरजस्तै हन्छु भन्ने लाग्थ्यो । उनलाई डिज्नीले धेरै हदसम्म काल्पनिक पनि बनायो । उक्त ट्याटुमा लेखिएको छ— ‘अ ड्रिम इज अ विस युर हार्ट मेक ।’ कार्कीको अर्काे ट्याटु दाहिने खुट्टामा छ ।
प्रियंकाले अमेरिका बसाइमा बेली डान्स सिकेकी थिइन् । बेली डान्स सिकेपछिको आफ्नो पहिलो प्रस्तुति नै उनको उक्त ट्याटुमा अंकित छ । उनको चौथो ट्याटुचाहिं गर्धनमा छ । जुन आयुषमान देशराजसँग उनको इन्गेजमेन्ट भएपछि खोपाइएको हो र त्यसमा आयुषमान र प्रियंका नाम जोडेर ‘आयंका’ लेखिएको छन् । प्रियंकालाई यो ट्याटुले आफ्नो प्रेम दर्साउँछ भन्ने लाग्छ । प्रियंका यस्ती युवती हुन्, जसलाई आफूलाई मनमा लागेको कुरा गरिहाल्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । त्यसैले पनि उनी मन परेको र विशेष कुरालाई शरिरमा चिह्नका रुपमा राख्न अघि सरिहाल्छिन् ।
पछिल्लो समय निकै चर्चामा रहँदै आएकी अभिनेत्री साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहले आफ्नो स्त-नको तल्लो भागमा ट्याटु खोपाएकी छिन् । साम्राज्ञीको उक्त ट्याटु सार्वजनिक भएपछि ठूलै चर्चा र वि-वाद चलेको थियो । विदेश भ्रमणका क्रममा खोपाइएको उक्त ट्याटु शरीरको सं-वेदनशील भागमा भए पनि ट्याटु आर्टिस्टको असावधानीका कारण सार्वजनिक हुन पुगेको थियो र त्यसैलाई लिएर केही समय मिडियामा रडाको मच्चियो ।
चलचित्र ‘प्रेमगीत–२’ मार्फत नेपाली रजतपटमा डेब्यु गरेकी नायिका अश्लेषासिंह ठकुरीले आफ्नो दाहिने ति-घ्रामा ट्याटु खोपाएकी छिन् । चलचित्र प्रदर्शनपछि ट्याटु खोपाएकी अश्लेषाले दाहिले ति-घ्रामा ठूलो फूलको रंगीन आकृति कुँदाएकी छिन् ।
अश्लेषाले जस्तोसुकै परिस्थिति आइपरे पनि नआत्तिई फूलजस्तै कोमल र सुन्दर भैरहने सन्देशका साथ उक्त ट्याटु खोपाएकी हुन् । तिघ्रामै किन भन्ने प्रश्नमा ठकुरी भन्छिन्— ट्याटु सधैं देखाइरहँदा पनि रमाइलो हुँदैन । समय–परिस्थितिअनुसार छोटा पहिरन लगाउँदा मात्र उक्त ट्याटु सार्वजनिक हुन्छ र त्यतिबेला त्यसको महत्व पनि बढी हुने उनको तर्क छ । अश्लेषालाई फूल सार्‍है मन पर्ने भएकाले पनि उनले ट्याटुमा कलरफुल फूल रोजेकी हुन् ।
प्रेमगीत चलचित्रबाट चर्चामा आएकी अभिनेत्री पूजा शर्माको पनि हातमा ट्याटु छ । उनले आफ्नो दाहिने हातमा भएको ट्याटुबारे बोल्दै आफूले एसएलसी दिएर बसेको समयमा यत्तिकै रहरले उक्त ट्याटु खोपाएको बताएकी छन् ।
अभिनेत्री श्वेता खड्काले श्रीकृष्ण श्रेष्ठको ‘कहाँ भेटिएला’बाट नेपाली फिल्ममा डेब्यु गरेकी हुन् । श्रीकृष्णकै अर्को फिल्म ‘कोहिनुर’ खेलेपछि उनीहरूले बिहे गरे । तर, विवाहको एक महिनामा नै श्रीकृष्णको निधन भयो । अभिनेत्री श्वेता खड्काको हातमा पनि एक ट्याटु छ जसमा दुई विशेष मिति लेखिएको छ । उनको यो ट्याटुसँग उनको जीवनको भावनात्मक गहिराई गाँसिएको छ । उनको ट्याटुमा पहिलो मिति असार २३ गतेको छ । उक्त मितिमा श्री कृष्ण र श्वेताको विवाह भएको थियो । त्यस्तै दोस्रो मितिमा पुष १२ लेखिएको छ । यो मितिमा श्री र उनको पहिलो भेट भएको थियो ।
छक्का पन्जा, ब्रासलेटलगायतका सिनेमामा काम गरेकी अभिनेत्री नम्रता सापकोटाले पनि एउटा प्वाख शरीरमा खोपाउन भ्याएकी छन् । उनको शरीरको पछाडी पट्टी रहेको उक्त ट्याटु केही समय अघि उनी गोवा गएर खिचाएका केही तस्वीहरुमा देखिएपछि निकै चर्चा बटुलेको थियो ।
नायिका सुष्मा कार्की अहिले कहाँ छिन् र के गर्दैछिन् भन्ने विषयमा नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई कमै मात्र खबर छ । कारण, चलचित्र क्षेत्रमा छिटो उदाएर छिटै क्रेज घटाएकी नायिका हुन्, कार्की । अभिनेत्री कार्कीको ट्याटु मोह पनि निकै नै रहेको छ । उनले पनि आफ्नो छातीमा ट्याटु बनाएकी छन् । उनले सूर्यको ट्याटुलाई निकै आकर्षक ढंगबाट खोपेकी छन् ।
अभिनेत्री पुजना प्रधानले पनि पहिलो ट्याटु आफ्नो हातमा पुजना भन्ने शब्द राखि ट्याटु खोपेकी थिइन् त्यस्तैपछि आफ्नो ढाडको दाहिने पातामा शिव र पार्वतीको आकर्षक ट्याटु खोपेकी छन् ।
साप्ताहिक तथा बिभिन्न अनालइनको सहयोगमा